Raad Raac News Online – Sawiro: Shirkii Kaluumaysiga Soomaaliya ee Garoowe lagu qabtay oo laga soo saaray talabooyin lagu hormarin karo
waxaa garoowe ku soo dhamaaday Shir seddex cisho socday oo looga hadlayay kaluumaysiga soomaaliya kaaso ay ka qayb galeen boqolal dadweyne oo ka kala yimid dalka gudahiisa iyo dibadiisa iyo sidoo kle Khuburo ku xeel dheer kheyraadka Badda.
Shirkas ayaa laga soo saaray gebagebadii Warmurtiyeed koobaya arrimaha loo baahanyahay in la qaado.
WAR MURTIYEEDKA MADASHA KALUUMAYSATA SOOMAALIYEED
Wasaaradda Kaluumaysiga iyo Kharaadaka Badda ee Puntland iyo hayadaha kala ha Secure Fishers iyo Shuraako oo katirsan barnaamijka One Earth Future waxay isla garteen mustaqbalka uu leeyahay kaluumaysigu si kor ugu qaado nolasha dadka , una dhiso dhaqaalaha horumarsan, una dhiiri galiyo amniga dadka xeebaha dagan Soomaaliya oo dhan. Kaluumaysigu wuxuu abuuraa furdase shaqo iyo dakhli waana matoorka kor u qaada dhaqaalaha Soomaaliya, laakiin wuxuu noqday mid aan horumar samayn marka loo eego wax soosaarka kale ee dalka.
Madsaha Kaluumaysiaga Soomaaliya waxay isla garteed mas’uuliydda in la horumariyo Kaluumaysiga Soomaaliya in ay tahay arin ka wada dhaxaysa dhamaan Wasaaradaha Kaluumaysiga ee Dawladda Federaalka iyo Dawladaha Xubnaha ka ah dawladda Federaalka iyo faaiidada laga helayo xiriirka kakala dhexeeyay beesha caalamka iyo hayadaha aan dawliga ahayn (NGO’s).
Shirka Madasha kaluumaysigu wuxuu u dhacay si ay ku jirto xamaas furfurnaan ah iyo in laga midaysanaa sidii loo xoojin lahaa isku xirnaanta Dawladda Federaalka iyo Dawladaha Xubnaha ka ah dawladda Federaalka iyo beesha caalamka iyo iyo hayadaha aan dawliga ahayn(NGO’s).
Madashaani waxay iftiimisay fursadaha looga adkaan lahaa caqabadaha hortaagan kaluumaysiga Soomaaliya.
Shirka Madasha Kaluumaysiga Soomaaliaya oo ka dhacay Garoowe,Puntland kusoo gabagaboobay iskuna raacay arimaha soo socda: